केवल तथ्यहरू: आतंक डिसअर्डर - जेफरसन सेन्टर - मानसिक स्वास्थ्य र पदार्थ प्रयोग सेवाहरू
पैनिक डिसअर्डर भनेको के हो?
आतंक डिसअर्डर भएका व्यक्तिहरूमा अचानक र दोहोरिने डरको आक्रमण हुन्छ जुन केहि मिनेट वा लामो समयसम्म रहन्छ। यी भनिन्छ आतंकवाद। आतंककारी हमलाहरू प्रकोपको डर वा नियन्त्रण गुमाउनुपर्‍यो जब कुनै वास्तविक खतरा नभए पनि हुन्छ। एक व्यक्तिको पनि आतंकको आक्रमणको बखत कडा शारीरिक प्रतिक्रिया हुन सक्छ। यो हृदयघातको जस्तो लाग्न सक्छ।
आतंक डिसअर्डर अक्सर किशोर किशोरीहरू वा प्रारम्भिक वयस्कमा सुरू हुन्छ। पुरुषहरू भन्दा धेरै महिलाहरूमा पेनिक डिसअर्डर हुन्छ। तर आतंक आक्रमणको अनुभव गर्ने सबैले पैनिक डिसअर्डर विकास गर्दैनन्।
आतंक विकार र आतंक आक्रमणको लक्षण र लक्षण के हुन्?
आतंक डिसअर्डर भएका व्यक्तिहरूसँग हुनसक्दछ:
अचानक र डरको बारम्बार आक्रमणहरू - आतंककारी हमलाहरू
आतंक आक्रमणको बखत नियन्त्रण बाहिर हुनुको भावना
विगतमा आतंक हमला भएका ठाउँहरूको डर वा बेवास्ता
आतंक हमलाका लक्षण र लक्षणहरू अचानक विकास हुन्छ र सामान्यतया १० मिनेटमा उनीहरूको चरम सीमामा पुगेको हुन्छ। एक पूर्ण विकसित उग्र हमलाले निम्न संकेत र लक्षणहरूको संयोजन समावेश गर्दछ:
सासको कमी वा हाइपरवेन्टिलेसन
मुटुको धड्कन वा दौड मुटु
छाती दुखाई वा असुविधा
काम्दै वा हल्लाउँदै
दिक्क लाग्ने भावना
तपाईको वरिपरिबाट अवास्तविक वा छुट्टिदैछ
मतली वा पेट दुखाइ
चक्कर, हल्का टाउको, वा बेहोश महसुस गर्दै
स्तब्ध वा झुकाव सनसनी
तातो वा चिसो चमक
आतंक डिसअर्डरको उपचार कसरी गरिन्छ?
आतंक विकार सामान्यतया मनोचिकित्सा, औषधि वा दुबैको साथ व्यवहार गरिन्छ।
आतंक आक्रमण र आतंक विकारको लागि स्व-मद्दत सल्लाहहरू
जब यो आतंक आक्रमणको कुरा आउँछ, पेशेवर उपचार र थेरापीले ठूलो भिन्नता बनाउन सक्दछ। तर तपाई आफैलाई मद्दत गर्न धेरै कुराहरु गर्न सक्नुहुन्छ:
आतंकको बारेमा जान्नुहोस्। केवल आतंकको बारेमा बढि ज्ञानले तपाईंको दु: खलाई कम गर्ने दिशामा लामो यात्रा गर्न सक्दछ।
धुम्रपान र क्याफिनबाट बच्नुहोस्। धूम्रपान र क्याफिन संवेदनशील व्यक्तिहरूमा आतंकको आक्रमण गर्न सक्छ।
तपाईंको सास कसरी नियन्त्रण गर्ने सिक्नुहोस्। हाइपरवेन्टिलेसनले धेरै संवेदनाहरू (जस्तै हल्का टाउको दुख्ने र छातीको जकडिएको) मा ल्याउँछ जुन आतंक आक्रमणको बेला हुन्छ। अर्कोतर्फ गहिरो सास फेर्दा आतंकका लक्षणहरू कम गर्न सकिन्छ।
विश्राम गर्ने तरिकाहरू अभ्यास गर्नुहोस्। नियमित अभ्यास गर्दा, योग, ध्यान, र प्रगतिशील मांसपेशी विश्राम जस्ता गतिविधिहरू शरीरको विश्राम प्रतिक्रियालाई सुदृढ बनाउँदछन् anxiety चिन्ता र आतंकमा संलग्न तनाव प्रतिक्रियाको विपरित।
NAMI वेबसाइटबाट जानकारी (अधिक जानकारीको लागि कृपया यहाँ हेर्नुहोस्).